Dukumintiga been-abuurka ah - Dokumentiyada ku soo iibso khadka tooska ah | counterfeitlicense.net
Soo Iibso Liisanka Wadista Wadnaha; Iibso Baasaboor Online ah; Ruqsadda Darawalnimada Beenka Diiwaangashan; Lacag been abuur ah; Shahaadooyinka dhimashada iyo kuwa kale:
Hal Dukaankeenna Joogtada ah oo loo Iibsado si loo Iibiyo Liisanka Wadista Wadista, Lacagta been abuurka ah iyo Dukumiintiyo kale:
Halkan counterfietlicense, waxaan si joogto ah u bixinnaa liisanka wadista diiwaangashan, lacagta been abuurka ah, baasaboorada asalka ah, kaararka deganaashaha ee diiwaangashan, shahaadooyinka dhalashada ee la diwaangeliyay iyo shahaadooyinka dhimashada. Adeegyadeena ayaa ah kuwa ugu dhakhsaha badan ee aad ka heli karto internetka. Waxaan ku siineynaa laysanka asliga ah ee asalka ah hal usbuuc shaqeynaya waxaanan toos ugu diraa cinwaanka boostadaada. Waxaan bilownay sanadkii 2009 annaga oo iibinay liisamada darawallada been abuurka ah ee Yurub iyo Mareykanka. Ilaa iyo markaas, hay'addeennu waxay ku kortay inay bixiso adeegyo badan oo ay ku jiraan dukumiintiyo diiwaangashan oo ka kala socda qaaradaha oo dhan. Guji Halkan si aad wax badan uga sii akhriso ama guji Halkan si aad noola soo xiriirto.
Halkan Guji Si Aad Waxbadan U Akhriso
Farqiga udhaxeeya Shatirada Wadista Waddaniga ah iyo Ruqsadda Darawalnimada Beenka ah ee Ku Shaqeysa Baasabooro iyo Dukumiintiyo Kale
Loogu talagalay laysanka darawalnimada iyo dukumiinti kasta oo kale oo aad ka iibsato degelkan, farqiga u dhexeeya laysanka darawalnimada ee Real ama laysanka darawalnimada asalka ah iyo laysanka darawalnimada been abuur ah inta badan diiwaangelinta. Waxaan ku daabacnaa dhammaan rukhsadaha darawalnimadeenna qalab tayo sare leh. Si kastaba ha noqotee, marwalba waxaan sameyneynaa diiwaangelin marka hore dukumiintiyada diiwaangashan. Hawsha diiwaangelintu waa qaali. Xaalada liisanka wadista, Inta lagu gudajiro Diiwaangelinta, waxaan bixinaa mas'uuliyiinta nagala shaqeeya qeybta gaadiidka si ay ugu geliyaan diiwaanadaada keydka macluumaadka. Marka hawlgalka diiwaangelinta la dhammaystiro, waxaa naloo siiyay lambar lambar laysan oo sharci ah oo loo isticmaalo Diiwaangelinta laysankaaga wadista. Hawshani waxay la mid tahay markaad iibsaneyso baasaaboor ama dukumiinti kasta oo annaga naga mid ah. Sidaa darteed, Markaad nala soo xiriir si aad u iibsato laysanka wadis ee asalka ah, waxaad si cad u sheegtaa inaad iibsaneyso laysanka wadista oo diiwaangashan, adeeggayagu wuxuu ku siin doonaa macluumaadka lagama maarmaanka ah iyadoo kuxiran Waddanka aad ku sugan tahay. Waxaad guji kartaa mid ka mid ah adeegyadan soo socda si aad u aragto waxa aannu qabanno:Liisanka Wadista","Passport","Kaarka deganaanshaha"Iyo"Kaalmada Visa"
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Loogu talagalay Diiwaangelinta Wadista Diiwaangelinta iyo Dukumiintiyo Kale:
Waa muhiim inaad taqaanid macluumaadka loo oggol yahay inaad siidaayaan macaamiishayada daryeelka macaamiisha ah iyo wixii aan laguu oggolayn inaad siidayso. Ogsoonow in kuwa aan macaamiishayada daryeelka macaamiisha ahayn ay tahay inay weydiistaan ​​sawir kaarka fiisahaaga ama lambarada kaarkaaga deynta. Si kastaba ha noqotee, haddii aad iibsato laysanka asliga ah ee asalka ah anaga. La taliyayaashayada adeegyadu waa inay kaa codsadaan macluumaadka shakhsi ahaaneed ee lagama maarmaanka u ah diiwaangelinta laysankaaga wadista asalka ah. Waad iska hubsan kartaa in macluumaadkani uusan ku dhicin gacanta dhinacyada saddexaad ee aan loo baahnayn. Qarsoodinimada ku aaddan maaraynta macluumaadkaaga ayaa ah waaritaan ganacsigeenna. Waad iska hubsan kartaa in macluumaadka aan kaa helno aan lagu soo daabicin internetka ama lagasoo deyn doonin adeegayaasheena aaminka ah si kasta ha noqotee. Just nala soo xiriir iyo hel dukumentiyadaada waqtiga diiwaangelinta.
Halkan Guji Si Aad Nagala Soo Xiriirto
Xakamaynta Tayada Baasaboorada Rasmiga ah iyo Dukumiintiyada Kale
Tayada baasabooradayadu waa halyeeyo. Markaad ka iibsato shirkadayada dukumiinti been abuur ah ama baasaboor ah, waxaad heleysaa gobolka dukumiintiyada farshaxanka. Waxaan si joogto ah u cusboonaysiinaa daabacaadayaashayada si aan ula kulanno tikniyoolajiyadda cusub ee baasaboorrada iyo baaritaannada aaladda metrooga bio. Naga soo iibso Baasaboor EU ah waxaanad u baahan doontaa inaad ku qorto macluumaadkaaga oo ay ku jiraan sawirro daabacan fartaada si aad ugu dhigto tikniyoolajiyadda bio-scan. Baasaboorka been abuurka ah, waxaad xor u ahaan doontaa inaad isticmaasho magac cusub. Si kastaba ha noqotee, waxaan kugula talineynaa inaad u isticmaasho sawirkaaga baasaboorada been abuurka ah si ay adiga ugu ekaato.
Tayada daabacaada baasaboorada been abuurka ah ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa dhammaan dokumentiyada kale. Marwalba waxaan joognaa adeeggaaga. Halkan riix oo akhri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan baasabooradayada.
Aqoonsiga Cusub oo Dhameystiran
Waxaan bixinaa xirmo aqoonsi oo cusub. Xidhmada aqoonsigayaga cusub ayaa kaaga baahan doona inaad: Ibsato shahaadada dhalashada, iibsato kaarka aqoonsiga been abuur ah, iibsato baasaboor cusub, iyo laysanka darawalnimada diiwaangashan. Khidmadaha baakadahayaga aqoonsiga oo dhammaystiran waxay ku yimaadaan qiimo dhimis maxaa yeelay haysashada dhokumentiyo sharci oo yar ayaa u fududayn doona dukumintiga kale ee diiwaangashan.
Lacag been abuur ah
Waxaan nahay khabiir ku takhasusay biilalka been abuurka ah. Waxaan ku takhasustay biilasha Euro iyo Dollarka. Xaashiyahayaga been abuurka ah waxay daabacaan oo u qaybiyaan lacag nadiif ah lambarro nambar duuban oo diiwaansan. Waxaan ku daabacnaa lacag taarikada wanaagsan waxaanan si siman uga caawinaa macaamillada caalamiga ah iyo SSD. Waxaan leenahay macaamiillo joogto ah oo loogu talagalay lacagta been abuurka ah iyo sidoo kale garsoorayaasha.
Halkan Guji Lacagta been abuurka ah
Soo Iibi Shahaadada Dhimashada been-abuurka ah
Shatiga Ka-hortagga, waxaan siinnaa Shahaadooyinka Dhimashada dadka u baahan. Waxaan tan ugu qabanaynaa si deg deg ah sida in shahaadada dhimashada loo istcimaalo in lagu sameeyo sheegashooyinka macaamil xawaaladeed by xigtada xigta. Shahaadada dhimashada sidoo kale waa dukumiinti faa'iido u leh xaalado badan waxayna u imaaneysaa si waxtar leh markii loo baahdo. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad nagala soo xiriirto macluumaadka daruuriga ah.
Nala soo xiriir si aad u hesho shahaadadaada dhimashada
Dalbo Liisanka Wadista Gaarka ah ee Jarmalka
Dalbo Liisanka Wadista Australiyaanka Khadka Tooska ah
Dalbo Liisanka Wadista Wadista UK Khadka Tooska ah
Laysanka darawalnimada ee USA
GUDBIN BADAN OO BADAN BADAN BADAN 100% AMMAAN IYO BADBAADO
Ruqsadda Darawalka Talyaaniga
Liisanka Wadista Faransiiska
Shatiga Wadista Kanada
Kusoo dhawow Bogga Khadka Tooska ah ee La-Talinta Khiyaanada Waxaan si wanaagsan loogu aqoonsan nahay khadka tooska ah iyo kan 'DarkWebs' oo ah shirkad hoggaamineed oo dukumiintiyo been abuur ah ah. Nala soo xiriir Si Aad U Iibsato Shatigaaga La-Talinta Maantaba. (counterfeitlicense1@gmail.com) WhatsApp: (+49 1521 4522002)
Iibso Kaarka Aqoonsiga Fake Online
Iibso Shahaadooyinka Rasmiga ah ee Tooska ah
Iibso Kusoo Kordhinta Lacagta Lacag been abuurka ah oo internetka ah
Iibso Liisanka Darawalnimada Kahortaga Khiyaanada Khadka Tooska ah
× Halkan Riix Halkan Usoo dir Fariinta WhatsApp